Tany niaviana sy ny nahitana an'Anosilava (Faratsiho)
Teo anelanelan’ny Maromena sy Ambohimandry andafy atsinanan’ny renirano Katsaoka no niandohany, tsy fantatra mazava fa eo ho eo fotsiny ihany.
Maro mianadahy Rainilezafy.
Rainilezafy koa dia maro anaka, fa nisy 16 mianadahy ny zanany. Sarotra ny fivelomana tamin’izany. Dia niparitaka samy nanao izay ahazoana fivelomana izy ireo, ka Rainilezafy dia tonga taty Faratsiho. Mbola tsy nisy mponina taty tamin’izany. Heniheny rakotry ny horonkely ny henihenin’ny Faratsiho. Rehefa tonga teto izy dia teto Anosilava, rambontany lavalava mitsoriaka mianavartra avy eo Faratsiho. Teto amin’ny toerana nanorenako (NDLR Andriamaroahina Albert) trano ity no nisy zohikely nipetrahany, tao izy no nanao afo mba tsy ho tazana avy eny Ambohipoloalina, toerana fandalovan’ny jiolahy.
Nalaza ny jiolahy tamin’izany taty Andrefan’Ankaratra. Rehefa avy nanao tontakely sy nandromba ny jiolahy dia niato nanao sakafo maimaika, rehefa avy mihinana dia manohy ny diany sady miteny fa “ny toerana nahavokisana tsy ipetrahana ela”sao tratry ny mpanaraka. Indraindray dia mifanojo ny samy jiolahy, dia velona ny ady ka lasa fitenenana ny hoe :”Jiolahin’Andrefan’Ankaratra, izay matanjaka no tompon’ny entana”. Dia toy izany ny toetoetryny tany tamin’izany.
Teo atsinanana kely nisy an-dRainilezafy io no nahitany fa be dia be ny toho. Norosany ny horonkely, feheziny, nataony goragora, dia natao tao anaty rano nosavasavany. Dia andrasany eo mandritry ny fotoana tokony ho fahefakadiny, dia batainy, borainy eo amin'ny toerana maimaina, ka to re izany, raofiny dia natapiny ka rehefa maina, tokony ho vary iray dia entiny miakatra hamidiny any Talatan’ny Maromena na Sabotsin’Ambohimandry. Taiza letsy no nahitan’ialahy itony, hoy hono ny rahalahiny, dia valiny hoe tany Mandridrano lavitra.
Nony taty aoriana ela dia mba nisy nanaraka azy ny tovolahy, nahita ny nataony dia rafitra koa naka toho. Nanao tatatra ry zalahy dia haka toho dia bahanany.tsy avelany. Mbay ialahy isany, ahy ity fa tsy an’ialahy isany, dia nirava maina ka velona ny hoe “Mitatatra ho and-Rainilezafy”.
Farany moa dia nanaraka azy ny zanany sasany, dia niara-nonina izy rehetra. Ramatoa Ramavo vadiny dia nitondra vary ka nafafiny sy noketsainy, vary mavobe no anaran’ny vary nentin-dRamavo, vary mena, mbola misy io mandraka androany.
Niaraka taminy taty koa Rafohiloka reniny sy Rainisira anadahin-dreniny. Ireo no antsoina hoe Razambe izay milevina ao amin'ny fasana ao Anosilava. Ankehitriny dia toy ny ilan-tsandry no tavela amin'ny taolam-balon'izy ireo. Kanefa dia ao foana izany.